Wariye iyo Haweenay 4 Canug umashay oo maanta la gaarsiiyay deeq lacageed”SAWIRO” – Radio Muqdisho
Wariye iyo Haweenay 4 Canug umashay oo maanta la gaarsiiyay deeq lacageed”SAWIRO”
Deeqdani lacageed ee maanta ay qaar ka mid ah Madaxda Warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa banaan gaarsiiyen wariye Cabdiqaadir Maxamed Ibraahim Iyeeyow oo gaaraysay kun iyo shan boqol ayaa lagu dabiibayaa cisbitaalka Madiino ee magaalada Muqdisho kaddib markii uu dhawaan ku soo dhawacmay qarax ka dhacay magalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Xoghayaha Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ Maxamed Ibraahim Bakistan oo gobta hadal ka jeediyay ayaa sheegay in kaalmadan lacagta ah ay tahay mid ay iska soo uruuriyeen qaar ka mid ah suxufiyiinta gudaha iyo labo kale oo ku nool dalka Netherland.
Agaasimaha Radio Muqdisho mudane Cabdiraxiin Ciise Caddow ayaa tilmaamay in tani ay qeyb ka tahay dhiirogalin ay usameynayaan walaalkood ku dhaawacmay qaraxii Baydhabo ka dhacay, isla markaana ay Ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaan inay dhexdooda isu gurmadaan.
Ehelada Saxafiga ku jira cisbitaalka Madiina oo Warbaahinta la hadlay ayaa ka mahadceliyay kaalmada lacageed ee ay soo gaarsiiyeen.
Dhanka kale Mas’uuliyiintan waxa ay deeq lacageed gaarsiiyeen hooyo Soomaaliyeed oo dhawaan afar carruur ah ku dhashay Cisbitaalka Masaarida ee Muqdisho, oo mid ka mid ah uu ka geeriyooday.
Agaasimha Radio Kumiye Abwaan Cabdullaahi Cismaan Guure ayaa guddoonsiiyay Faadumo Xasan Maxamed oo ah haweeneyda dhashay afarta carruurta ah.
Abuukar Albadri oo isna goobta hadal ka jeediyay ayaa ka codsaday bulshada Soomaaliyeed inay kaalmo deg deg ah la soo gaaraan hooyadaasi Soomaaliyeed oo ka soo jeedda qoys sabool ah, isla markaana ka timid dhul miyi ah.
Aabaha dhalay Faadumo ayaa uga mahadceliyay bahda Warbaahinta sida ay isugu xil qaameen inay kaalmadaan soo gaarsiiyaan.
Sawir Qaade: Aamino Xuseen Maxamed
Horjooge sare oo Al-shabaab ah oo ay gacanta ku dhigtay dowladda Soomaaliya